Mr. Zhang WenHong နှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး (၂) - သိကောငျးစရာ - Pauk Phaw - PaukPhaw Myanmar
Mr. Zhang WenHong နှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး (၂)
Summary : ဒါကွောငျ့ ရောဂါအခွအေနေ ပွငျးထနျသှားစတေဲ့ အဓိကတရားခံက အာဟာရခြို့တဲ့ခွငျးပဲ ဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ဆီမှာရှိတဲ့ ပါမောက်ခတဈယောကျဟာ အာဟာရအတှကျ တာဝနျယူမယျလို့‎ ပွောလာတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောက ကြှနျတေျာ့အဖှဲ့နဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျတယျ။ ဒီလိုအာဟာရခြို့တဲ့မှုဟာ ရောဂါအခွအေနေ ပွငျးထနျသှားစတေဲ့ အဓိက တရားခံပဲ ဖွဈတယျ။
ရှနျဟိုငျးရောဂါကုသရေးအထူးအဖှဲ့ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ Hua Shan ဆေးရုံ ကူးစကျရောဂါဌာန ဌာနမှူး Mr. Zhang WenHong နှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး (၂)
ပါမောက်ခ Zhang -
ဒီတဈသုတျ ပွညျပကနပွေနျလာကွတဲ့သူတှမှော နိုငျငံခွားပညာတျောသငျ ကြောငျးသားတှလေညျး ပါတယျ။ အလုပျသှားလုပျတဲ့သူတှလေညျး ပါတယျ။ အဓိက ကတော့ အလုပျသှားလုပျတဲ့သူတှပေေါ့။ သူတို့တှေ ဒီတဈခေါကျ ပွညျတျောပွနျကွတဲ့အခြိနျမှာ တရုတျနိုငျငံကိုပွနျလာတဲ့ ခရီးလမျးတဈလြှောကျလုံး အသကျလုပွေးလာရသလိုပဲ အစားအစာ ကောငျးကောငျး မစားရဘူး၊ အိတျထဲမှာလညျး ဘီစကှတျနဲ့ ခေါကျဆှဲခွောကျထုပျတှပေဲ။ ဒီကိုရောကျပွီးနောကျမှာ ကြှနျတျောတို့ ရောဂါပိုးစဈဆေးဂိတျတှေ ရှိတယျ။ ရောဂါပိုးစဈဆေးမှုက တဈရကျနှဈရကျလောကျ ကွာမယျ။ ဒါတှပွေီးမှ သုံးလေးရကျလောကျမှ ဟိုတယျကို ရောကျလာမယျ။ အဲအခြိနျမှာ စိတျတိုစရာတှခေညျြးပဲ။ ဟိုတယျမှာလညျး quarantine နရေဦးမယျ။ ကိုယျ့မိသားစုနဲ့လညျး မတှရေ့ဘူး။ အိတျထဲမှာ ခေါကျဆှဲခွောကျထုပျတှေ အမြားကွီးကနျြနတောတှတေ့ော့ ခေါကျဆှဲခွောကျတှပေဲ ဆကျစားဖွဈတယျ။ ဒီလိုလူနာမြိုးတှမှော အဟာရ မပွညျ့ဝတာ တှရေ့တယျ။ ဒါဟာ ရောဂါအခွအေနေ ပွငျးထနျသှားစတေဲ့ အရေးအကွီးဆုံးအကွောငျးရငျး ဖွဈတယျ။
ဒါကွောငျ့ ရောဂါအခွအေနေ ပွငျးထနျသှားစတေဲ့ အဓိကတရားခံက အာဟာရခြို့တဲ့ခွငျးပဲ ဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ဆီမှာရှိတဲ့ ပါမောက်ခတဈယောကျဟာ အာဟာရအတှကျ တာဝနျယူမယျလို့‎ ပွောလာတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောက ကြှနျတေျာ့အဖှဲ့နဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျတယျ။ ဒီလိုအာဟာရခြို့တဲ့မှုဟာ ရောဂါအခွအေနေ ပွငျးထနျသှားစတေဲ့ အဓိက တရားခံပဲ ဖွဈတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကနျြးမာရေးဌာန အုပျခြုပျရေးမှူး Zhu က လူနာတှအေတှကျ နစေ့ဉျကွကျဥ ၄ လုံး ပေးဖို့ အာဟာရပညာရှငျကို ဖုနျးဆကျပွောခဲ့တယျ။ ငါ မငျးကိုကနျြတာ ဘာမှမတောငျးဆိုဘူး။ ဒါပမေဲ့ အနညျးဆုံး ကွကျဥ ၄ လုံးကိုတော့ နတေို့ငျးပေးရမယျ။ ကွညျဥ ၄ လုံးဖွဈဖွဈ ဒါမှမဟုတျ တခွားအာဟာရပွညျ့တဲ့ အစားအစာအဖွဈဖွဈ အဓိကမဟုတျဘူး။ အဓိကသော့ခကျြက လုံလောကျတဲ့ အာဟာရပွညျ့ဝအောငျ သခြောအောငျ လုပျထားရမယျ။ ဒါမှ လူနာမှာ စှမျးအငျအလုံအလောကျရှိပွီး ကိုယျခံအားကောငျးလာနိုငျတယျ။
တကယျလို့ မငျးဒီနဖြေ့ားသှားပွီဆိုပါတော့ သခြောတယျ ကိုယျ့ကိုကိုယျ Covid-19 ဖွဈပွီလို့ထငျမှာပဲ။ အသညျးအသနျဖြားတဲ့အခြိနျက ဘယျခြိနျလဲ ? ၇ ရကျမွောကျနေ့ သို့မဟုတျ ၁၀ ရကျမွောကျနေ့။ တကယျလို့ နှဈပတျကြျောသှားပွီး ဘယျလောကျထိ ရောဂါပွငျးထနျပါစေ သရေေးရှငျရေးထိ မရောကျလာရငျ အဲ့ဒီလူနာက ပုံမှနျဆိုရငျ မသနေိုငျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ၇ ရကျမွောကျနမှေ့ ၁၀ ရကျမွောကျနအေ့တှငျးမှာ အသညျးအသနျဖွဈမယျ။ အမှနျမှာတော့ အဲ့ဒီအခြိနျတှငျးမှာ ကြှနျတျောတို့ ခန်ဓာကိုယျဟာ ရောဂါပိုးနဲ့ ယှဉျပွိုငျပွေးနရေတဲ့အခြိနျပဲ။ ကြှနျတျောတို့ ခန်ဓာကိုယျကိုယျခံအားတှေ အမြားကွီးရှိအောငျနရေမယျ။ သငျသိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ခန်ဓာကိုယျကနေ ခုခံနိုငျတဲ့စဈသားတှေ အမြားကွီးထုတျနိုငျရမယျ။ အဲဒီစဈသားတှကေ သငျကိုယျတိုငျအတှကျပဲ။ ကြှနျတျောတို့က ဒီရောဂါပိုးကို ခုခံနိုငျမဲ့ထူးခွားတဲ့လက်ခဏာရှိတဲ့ anti-body ဇီဝဆေးတှကေို ထုတျလုပျရမယျ။ ဘာနဲ့ထုတျလုပျမလဲ? အသားဓာတျ(ပရိုတငျးဓါတျ)တှပေဲပေါ့။
အငျတာနကျပျေါမှာ လူအမြားက ကြှနျတေျာ့ကို ပွဈတငျဝဖေနျကွတယျ။ ဆရာကွီးမြား၊ အငျတာနကျအသုံးပွုသူမြားဟာ ကြှနျုတေျာ့ကို စောငျ့ကွညျ့နကွေတယျ။ အငျတာနကျပျေါမှာ ကြှနျတျော ဒီရကျပိုငျး နာမညျကွီးတာကိုသိပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့ကိုဝဖေနျသူတှကေ ကြှနျတျောဘယျလိုလူလဲဆိုတာကို ဝဖေနျတာပိုမြားတယျ။ ဒါကိုကြှနျတျောသိပါတယျ။ ဥပမာ - ဆရာဝနျတဈဦးဟာ ဝငျငှအေမွောကျအမြားရှိတယျ။ ဒါကတော့ အမြားသိတဲ့ကိစ်စပါ။ ကြှနျတျောကတော့ အတျောလေးဆငျးရဲတယျ။ ကြှနျတျော ဥရောပဆရာဝနျနှငျ့ မနှိုငျးယှဉျနိုငျဘူး။ ကြှနျတျာရှငျးရှငျးလငျးလငျးပွောမယျ သူတို့တှထေဲကတဈယောကျယောကျ ကြှနျတေျာ့ကို ဝဖေနျမယျဆိုရငျ ကြှနျတျောကတော့ လကျမခံနိုငျဘူး။ ကြှနျတျောသခြောပေါကျ ပွောခငျြတာကတော့ ရောဂါအနညျးငယျမှ အသဲအသနျရောဂါစဖေို့ အတှကျ အဓိကအခကျြကတော့ သငျ့မှာ လုံလောကျတဲ့အာဟာရနဲ့ ပရိုတိနျးတှရှေိရမှာ။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောအဲ့ဒီအခြိနျက သူတို့နဲ့ပွောတယျ။ အကယျ၍ သငျနမေကောငျးနတေဲ့အခြိနျမှာ ဆနျပွုတျနဲ့ မုနျ့ညငျးခဉျြတှပေဲ စားနမေယျဆိုရငျ သငျဒုက်ခရောကျလိမျ့မယျ။ သငျရဲ့မိတျဆှတှေထေဲက တဈဦးဦး နမေကောငျးနတေဲ့အခြိနျမှာ သငျက သူ့ကိုဆနျပွုတျပွုတျပွီး တိုကျလိုကျမယျဆိုရငျ သငျက သူ့ကိုဂရုစိုကျတယျလို့ တခွားသူတှကေ ပွောလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့မှာ စားခငျြစိတျမရှိဘူး။ ဒါနဲ့ သူစားခငျြစိတျရှိအောငျ သငျက မုနျ့ညငျးခဉျြလေး လုပျပေးလိုကျမယျ။ ကြှနျတျောခငျဗြားတို့ကိုပွောပွမယျ ဆနျပွုတျနဲ့ မုနျ့ညငျးခဉျြ ပေါငျးပွီးစားမယျဆိုရငျ ကိုယျခံအားထှကျလာမှာ မဟုတျဘူး။ သငျသိပါသလား။ ကြှနျတျောတို့အရေးကွီးဆုံးက ကိုယျခံအားရှိဖို့ပဲ။ ဒီအခြိနျမှာ သငျနမေကောငျးဖွဈနမေယျဆိုရငျ ဘယျလိုကာကှယျမလဲ။ ကြှနျတျောထငျတာကတော့ လုပျဆောငျခကျြနှဈမြိုးကို လုပျပေးရမယျ။ ပထမအခကျြက သငျသာ အစာစားခငျြစိတျသာ ရှိမယျဆိုရငျ လုံလောကျတဲ့ နှားနို့နဲ့ကွကျဥကို ဖွညျ့စှကျရမယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ သငျအမဲသားကငျစားမယျ ဆိုရငျတောငျ စားလို့ဝငျမှာတောငျ မဟုတျဘူး။ အမဲသားကငျ ဘယျအခြိနျတှေ စားသငျ့သလဲဆိုရငျ မကွာခဏစားပေးပါ။ သငျနမေကောငျးဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ အမဲသားကငျစားမယျဆိုရငျ စားလို့ဝငျတော့မှာမဟုတျဘူး။ ဟုတျတယျမလား။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ အစာကွဖေို့ အလှယျဆုံးက ဘယျဟာလဲဆိုတော့ ကွကျဥနဲ့နှားနို့ပဲ ဟုတျတယျမလား။ ကွကျဥကတော့ သခြောပေါကျစားရမှာ။ အသားကတော့ စားလို့ရရငျတော့ နညျးနညျးလေး စားပေးရမယျ။ နောကျထပျငါးဟငျးခြိုရညျကိုလဲ သောကျပေးရမယျ။ တရုတျတှကေ ငါးဟငျးခြိုရညျကို ပွုတျသောကျရတာ ကွိုကျတယျ။ ငါးဟငျးခြိုရညျသောကျတဲ့အခါ အတတျနိုငျဆုံး ငါးအဖကျကိုလဲ စားပေးရမယျ။ သငျသိတယျမလား။ ဂရိုတငျးဓာတျက ကြှနျတျောတို့အတှကျ အရေးကွီးဆုံးတဈခုဖွဈတယျ။ ဘာအတှကျလဲဆိုတော့ ကိုယျခံအားရှိဖို့အတှကျပဲ။ နောကျထပျ ဘီတာမငျစီဓာတျပါတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကိုလဲ စားနိုငျသလောကျ စားပေးရမယျ။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ဒီအခြိနျမှာ အှနျလိုငျးပျေါမှာရှိတဲ့ အနောကျနိုငျငံက သူငယျခငျြးမြား အကယျ၍ သငျ့မိသားစုထဲက တဈဦးဦးရောဂါပိုးကူးစပျခံရပွီ ဒါမှမဟုတျ သငျကိုယျတိုငျ ရောဂါပိုးကူးစပျခံရပွီဆိုရငျ ဒီအခွအေနမှော မိမိအတှကျ အရေးကွီးဆုံးကတော့ အာဟာရရှိရမယျဆိုတာကို နားလညျရပါမယျ။ ခငျဗြားကိုယျတိုငျက ဘာလုပျနိုငျမလဲ။ ခငျဗြားက ဆရာဝနျလဲမဟုတျဘူး။ နမေကောငျးတော့ ဆေးလဲမရှိဘူး။ ဒါဆိုခငျဗြားလုပျနိုငျတာက ဘာလဲ။ အာဟာရရှိဖို့လိုတာလေ။ အာဟာရရှိမယျဆိုရငျ ကြှနျတျောသခြောပေါကျ ခငျဗြားကိုပွောပွမယျ လူအမြားစု မိမိ၏ရောဂါပိုးကို အခွအေနတေဈခုမှာ ရပျထားလို့ရပွီ။ ဘယျအခွအေနလေဲဆိုတော့ ပွနျလညျကောငျးမှနျလာနိုငျတဲ့ အခွအေနေ။ ၁၀ ရကျတာအခြိနျကို ကြျောလှားနိုငျမယျဆိုရငျ ဒီရောဂါကို ကြှနျတျောတို့ အခွခေံအရ တိုကျခိုကျနိုငျသှားပွီ။
ရှန်ဟိုင်းရောဂါကုသရေးအထူးအဖွဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Hua Shan ဆေးရုံ ကူးစက်ရောဂါဌာန ဌာနမှူး Mr. Zhang WenHong နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း (၂)
ပါမောက္ခ Zhang -
ဒီတစ်သုတ် ပြည်ပကနေပြန်လာကြတဲ့သူတွေမှာ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် ကျောင်းသားတွေလည်း ပါတယ်။ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့သူတွေလည်း ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့။ သူတို့တွေ ဒီတစ်ခေါက် ပြည်တော်ပြန်ကြတဲ့အချိန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့ ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံး အသက်လုပြေးလာရသလိုပဲ အစားအစာ ကောင်းကောင်း မစားရဘူး၊ အိတ်ထဲမှာလည်း ဘီစကွတ်နဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်တွေပဲ။ ဒီကိုရောက်ပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရောဂါပိုးစစ်ဆေးဂိတ်တွေ ရှိတယ်။ ရောဂါပိုးစစ်ဆေးမှုက တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက် ကြာမယ်။ ဒါတွေပြီးမှ သုံးလေးရက်လောက်မှ ဟိုတယ်ကို ရောက်လာမယ်။ အဲအချိန်မှာ စိတ်တိုစရာတွေချည်းပဲ။ ဟိုတယ်မှာလည်း quarantine နေရဦးမယ်။ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့လည်း မတွေ့ရဘူး။ အိတ်ထဲမှာ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်တွေ အများကြီးကျန်နေတာတွေ့တော့ ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေပဲ ဆက်စားဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလူနာမျိုးတွေမှာ အဟာရ မပြည့်ဝတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ ရောဂါအခြေအနေ ပြင်းထန်သွားစေတဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းရင်း ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ရောဂါအခြေအနေ ပြင်းထန်သွားစေတဲ့ အဓိကတရားခံက အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိတဲ့ ပါမောက္ခတစ်ယောက်ဟာ အာဟာရအတွက် တာဝန်ယူမယ်လို့‎ ပြောလာတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တယ်။ ဒီလိုအာဟာရချို့တဲ့မှုဟာ ရောဂါအခြေအနေ ပြင်းထန်သွားစေတဲ့ အဓိက တရားခံပဲ ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Zhu က လူနာတွေအတွက် နေ့စဉ်ကြက်ဥ ၄ လုံး ပေးဖို့ အာဟာရပညာရှင်ကို ဖုန်းဆက်ပြောခဲ့တယ်။ ငါ မင်းကိုကျန်တာ ဘာမှမတောင်းဆိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ အနည်းဆုံး ကြက်ဥ ၄ လုံးကိုတော့ နေ့တိုင်းပေးရမယ်။ ကြည်ဥ ၄ လုံးဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် တခြားအာဟာရပြည့်တဲ့ အစားအစာအဖြစ်ဖြစ် အဓိကမဟုတ်ဘူး။ အဓိကသော့ချက်က လုံလောက်တဲ့ အာဟာရပြည့်ဝအောင် သေချာအောင် လုပ်ထားရမယ်။ ဒါမှ လူနာမှာ စွမ်းအင်အလုံအလောက်ရှိပြီး ကိုယ်ခံအားကောင်းလာနိုင်တယ်။
တကယ်လို့ မင်းဒီနေ့ဖျားသွားပြီဆိုပါတော့ သေချာတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် Covid-19 ဖြစ်ပြီလို့ထင်မှာပဲ။ အသည်းအသန်ဖျားတဲ့အချိန်က ဘယ်ချိန်လဲ ? ၇ ရက်မြောက်နေ့ သို့မဟုတ် ၁၀ ရက်မြောက်နေ့။ တကယ်လို့ နှစ်ပတ်ကျော်သွားပြီး ဘယ်လောက်ထိ ရောဂါပြင်းထန်ပါစေ သေရေးရှင်ရေးထိ မရောက်လာရင် အဲ့ဒီလူနာက ပုံမှန်ဆိုရင် မသေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၇ ရက်မြောက်နေ့မှ ၁၀ ရက်မြောက်နေ့အတွင်းမှာ အသည်းအသန်ဖြစ်မယ်။ အမှန်မှာတော့ အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရောဂါပိုးနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြေးနေရတဲ့အချိန်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ခံအားတွေ အများကြီးရှိအောင်နေရမယ်။ သင်သိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ခုခံနိုင်တဲ့စစ်သားတွေ အများကြီးထုတ်နိုင်ရမယ်။ အဲဒီစစ်သားတွေက သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့က ဒီရောဂါပိုးကို ခုခံနိုင်မဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရှိတဲ့ anti-body ဇီဝဆေးတွေကို ထုတ်လုပ်ရမယ်။ ဘာနဲ့ထုတ်လုပ်မလဲ? အသားဓာတ်(ပရိုတင်းဓါတ်)တွေပဲပေါ့။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူအများက ကျွန်တော့်ကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်။ ဆရာကြီးများ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများဟာ ကျွန်ုတော့်ကို စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်း နာမည်ကြီးတာကိုသိပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုဝေဖန်သူတွေက ကျွန်တော်ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကို ဝေဖန်တာပိုများတယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ ဥပမာ - ဆရာဝန်တစ်ဦးဟာ ဝင်ငွေအမြောက်အများရှိတယ်။ ဒါကတော့ အများသိတဲ့ကိစ္စပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အတော်လေးဆင်းရဲတယ်။ ကျွန်တော် ဥရောပဆရာဝန်နှင့် မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တ်ာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ် သူတို့တွေထဲကတစ်ယောက်ယောက် ကျွန်တော့်ကို ဝေဖန်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်သေချာပေါက် ပြောချင်တာကတော့ ရောဂါအနည်းငယ်မှ အသဲအသန်ရောဂါစေဖို့ အတွက် အဓိကအချက်ကတော့ သင့်မှာ လုံလောက်တဲ့အာဟာရနဲ့ ပရိုတိန်းတွေရှိရမှာ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်က သူတို့နဲ့ပြောတယ်။ အကယ်၍ သင်နေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဆန်ပြုတ်နဲ့ မုန့်ညင်းချဉ်တွေပဲ စားနေမယ်ဆိုရင် သင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ သင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲက တစ်ဦးဦး နေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ သင်က သူ့ကိုဆန်ပြုတ်ပြုတ်ပြီး တိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင်က သူ့ကိုဂရုစိုက်တယ်လို့ တခြားသူတွေက ပြောလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ စားချင်စိတ်မရှိဘူး။ ဒါနဲ့ သူစားချင်စိတ်ရှိအောင် သင်က မုန့်ညင်းချဉ်လေး လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြမယ် ဆန်ပြုတ်နဲ့ မုန့်ညင်းချဉ် ပေါင်းပြီးစားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခံအားထွက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ သင်သိပါသလား။ ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ်ခံအားရှိဖို့ပဲ။ ဒီအချိန်မှာ သင်နေမကောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်မျိုးကို လုပ်ပေးရမယ်။ ပထမအချက်က သင်သာ အစာစားချင်စိတ်သာ ရှိမယ်ဆိုရင် လုံလောက်တဲ့ နွားနို့နဲ့ကြက်ဥကို ဖြည့်စွက်ရမယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သင်အမဲသားကင်စားမယ် ဆိုရင်တောင် စားလို့ဝင်မှာတောင် မဟုတ်ဘူး။ အမဲသားကင် ဘယ်အချိန်တွေ စားသင့်သလဲဆိုရင် မကြာခဏစားပေးပါ။ သင်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အမဲသားကင်စားမယ်ဆိုရင် စားလို့ဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်တယ်မလား။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အစာကြေဖို့ အလွယ်ဆုံးက ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ ကြက်ဥနဲ့နွားနို့ပဲ ဟုတ်တယ်မလား။ ကြက်ဥကတော့ သေချာပေါက်စားရမှာ။ အသားကတော့ စားလို့ရရင်တော့ နည်းနည်းလေး စားပေးရမယ်။ နောက်ထပ်ငါးဟင်းချိုရည်ကိုလဲ သောက်ပေးရမယ်။ တရုတ်တွေက ငါးဟင်းချိုရည်ကို ပြုတ်သောက်ရတာ ကြိုက်တယ်။ ငါးဟင်းချိုရည်သောက်တဲ့အခါ အတတ်နိုင်ဆုံး ငါးအဖက်ကိုလဲ စားပေးရမယ်။ သင်သိတယ်မလား။ ဂရိုတင်းဓာတ်က ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ခံအားရှိဖို့အတွက်ပဲ။ နောက်ထပ် ဘီတာမင်စီဓာတ်ပါတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုလဲ စားနိုင်သလောက် စားပေးရမယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချိန်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ အနောက်နိုင်ငံက သူငယ်ချင်းများ အကယ်၍ သင့်မိသားစုထဲက တစ်ဦးဦးရောဂါပိုးကူးစပ်ခံရပြီ ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင် ရောဂါပိုးကူးစပ်ခံရပြီဆိုရင် ဒီအခြေအနေမှာ မိမိအတွက် အရေးကြီးဆုံးကတော့ အာဟာရရှိရမယ်ဆိုတာကို နားလည်ရပါမယ်။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ခင်ဗျားက ဆရာဝန်လဲမဟုတ်ဘူး။ နေမကောင်းတော့ ဆေးလဲမရှိဘူး။ ဒါဆိုခင်ဗျားလုပ်နိုင်တာက ဘာလဲ။ အာဟာရရှိဖို့လိုတာလေ။ အာဟာရရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်သေချာပေါက် ခင်ဗျားကိုပြောပြမယ် လူအများစု မိမိ၏ရောဂါပိုးကို အခြေအနေတစ်ခုမှာ ရပ်ထားလို့ရပြီ။ ဘယ်အခြေအနေလဲဆိုတော့ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေ။ ၁၀ ရက်တာအချိန်ကို ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီရောဂါကို ကျွန်တော်တို့ အခြေခံအရ တိုက်ခိုက်နိုင်သွားပြီ။
Keywords : Mr.,Zhang,WenHong,နှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး,(၂)
Mr. Zhang WenHong နှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး(၁)
Mr. Zhang WenHong နှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး (၃)